Miisaska isku dhufashada ▷ Descub️ Soo hel khadka tooska ah ▷ ➡️
TWaxaad ka hadlaysaa Isku dhufashada. Waxay noqon kartaa wax ka baro sidaad u malaynayso. Wax walba waa arrin ku saabsan ogaanshahooda, ku celcelintooda iyo xusuusintooda wayna kula sii joogayaan inta noloshaada ka hadhay. Tag!
Cilad: muuqaalka ayaa laga yaabaa inuusan jirin d0241853ho
La Miiska isku dhufashada waa wax aad isticmaali doontid marar badan intaad nooshahay. Weligaa ma iloobi doontid haddii aad wax ku barato da 'yar. Haddii aan si joogto ah ugu celcelinno mid kasta oo ka mid ah jadwalka, dhowr saacadood gudahood waxaad awoodi doontaa inaad xaqiijiso inaad horeyba u maareysay lambarrada oo dhan si aad isu dhufato.
Ma baraneysaa miisaska? Waxaan kugula talineynaa maqaalkeena: sida loo barto jadwalka isku dhufashada. Xusuusnow taas Jadwalka isku dhufashada 1 illaa 10 xisaab ayey muhiim ugu yihiin. Haddii aadan si dhakhso leh u baran, waxaad dhibaatooyin kala kulmi doontaa mustaqbalka marka ay timaado sameynta xisaabinta fudud. Laakiin ha argagixin! Waxaan kuu xaqiijineynaa inay ka fududdahay sida aad u maleyneyso. Tusaale ahaan, waa wax xiiso leh inaad fahanto in 3 x 4 yihiin 12. Tan macnaheedu waa in 3 lagu celceliyey 4 jeer, waxaan kaloo dhihi karnaa 4 ayaa lagu celiyey 3 jeer, waa isku mid.
In kasta oo ay xiiso leedahay fahmaan sida isku dhufashada u shaqeysoNoloshaada shakhsi ahaaneed, waxay noqon doontaa xusuustaada oo akhrin doonta natiijada isku dhufasho kasta isla markiiba.
1 Jadwalka isku dhufashada 1 illaa 10
2 Waa maxay jadwalka isku dhufashada?
2.1 Faa'iidooyin noocee ah ayaa miiska isku dhufashada keenay?
3 Sidee loo barto jadwalka isku dhufashada?
4 Jadwalka 1aad
5 Jadwalka 2aad
6 Jadwalka 3aad
7 Jadwalka 4aad
8 Jadwalka 5aad
9 Jadwalka 6aad
10 Jadwalka 7aad
11 Jadwalka 8aad
12 Jadwalka 9aad
13 Jadwalka 10aad
Jadwalka isku dhufashada 1 illaa 10
ka miisaska isku dhufashada waa lagama maarmaan, nolosheena oo dhan waxaan ka heli doonnaa xaalado halka waa inaan ogaannaa oo aan baran karnaa fudayd weyn. Xaaladaha ugu badan ee aan ka heli karno waxay noqon karaan:
• Inaad iibsato 10 tikidhada dhacdo loogu talagalay qoyskaaga oo dhan waxaadna u baahan tahay inaad si dhakhso leh u ogaato qiimaha dadka oo dhan. Hal suurtagal ayaa noqon karta in midba mid lagu daro wixii ka soo baxa, suuro galna waa in la isticmaalo la 1 miis0 taasi waxay na siin laheyd xalka isla markiiba.
• Xaalad kale ayaa noqon karta ogaanshaha intee shidaal ayaan u baahan doonaa si aan meel u aadno, haddii aan ogaanno waxa baabuurkeennu ku bixiyo 5-tii kilomitirba. Xaaladdan oo kale waan isticmaali karnaa la 5 miis sida ikhtiyaarka ugu fiican.
• Saber meeqa shay ayaa ku jira sanduuqyo badan haddii aan ogaanno inta qaybood ee ku jira mid kasta oo ka mid ah.
• Ogow qiimaha buuxa ee dufcad walxaha ah haddii aan ogaanno inta qiimihiisu yahay.
• Ogow qiimaha darsin ukun ah haddii aan ogaanno waxa midkood u qalmo.
• Haddii aad shirkad leedahay oo aad leedahay 2000 oo shaqaale ah oo dhammaantood ay qaadan doonaan mushahar isku mid ah, markaa isku dhufasho fudud ayaa kaa caawin kara inaad ogaato inta lacag ee ay tahay inaad siiso dhammaan shaqaalaha shirkaddaada. Waa hawlgallo aad u badan.
Waxaas oo dhan iyo in ka badanba waa muhiim in si fiican loo ogaado miiska isku dhufashadaSidoo kale, way wanaagsan tahay in la ogaado faa'iidooyinka barashada jadwalka isku dhufashada. Sida aan arki karno, xaaladaha aan u soconno u baahan miiska isku dhufashada waa wax aad u badan oo waliba kala duwan, waana taas sababta u hanashada iyo si qoto dheer u ogaanshahoodu ay u dhowdahay waajibaad nolosheena.
Waa maxay jadwalka isku dhufashada?
Hal-abuurnimadii miisaska isku dhufashada waxaa loo aaneynayaa falsafada iyo xisaabta Pythagoras. Sirdoon badan, wuxuu ku guuleystey inuu indha indheeyo howlahan xisaabeed, in kastoo markii dambe ay ahayd dugsiga Pythagorean kii iyaga kaamilay.
Jadwalka isku dhufashada ahaayeen waqtigooda kacaan dhab ah, Maaddaama ay ku mahadsan yihiin hawlo xisaabeed oo ballaadhan ayaa la samayn karaa iyada oo aan lagu darin tirooyin badan marar badan.
Sannado badan, dhammaan noocyada miisaska iyo jadwalka ayaa la sameeyay, miisaska qaar waxay ahaayeen 3 tirooyin ah 0 illaa 999, laakiin ma aysan helin guusha miisaska aasaasiga ah ee 0 illaa 10.
in 1642 Blaise Pascal wuxuu ikhtiraacay kalkuleytar toos ah kaas oo ahaa rubric loogu talagalay hawlgalladaas xisaabeed.
Miiskii ugu horreeyay ee isku dhufashada, wuxuu ka koobnaa miis Cartesian ah (ama Miiska Pythagorean ) kaas oo ka koobnaa ku soo biirista sanduuq kasta oo kan kale la socda.
Faa'iidooyin noocee ah ayaa miiska isku dhufashada keenay?
• Ganacsatadu si dhaqso badan ayey howlahooda wax iibsiga iyo iibinta u sameyn karaan.
• Dhaqaaleyahannada iyo canshuur uruuriyayaasha xilligaas waxay hadda ku qaban karaan howlo ballaaran muddo gaaban.
• Deganayaasha ayaa sameyn kara howlo aad u adag oo horey waqti dheer u qaatay.
Sida aan aragno, xisaabta iyo gaar ahaan miisaska isku dhufashada, bilowgii horeba waxay bilaabeen inay soo saaraan tii ugu horeysay faa iidooyinka bulshada. Waqtigaas, haysashada qalab noocan oo kale ah waxay ahayd hadiyad dhab ah oo saynisku u keenay. Maanta, waa wax aan la qiyaasi karin in lagu noolaado miisas isku-dhufasho la'aan ah, maaddaama malaayiin hawlgal ah la qabto maalin kasta halkaasoo miisaskaasi lagama maarmaan u yihiin.
Sidee loo barto jadwalka isku dhufashada?
Waad garan doontaa iyaga oo dhan 1 saac gudahood!. Hadaad isweydiiso sida loo barto jadwalka isku dhufashada, waxaan haynaa war wanaagsan, waa wax aad u fudud xeelad ! Maskaxdu waxay leedahay laba nooc oo xusuus ah: mid gaaban iyo mid dheer, khiyaanadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh u baratid oo weligoodba way ku sii jiri doonaan. Waxaan raacaynaa talaabooyinkan miisaska ka dhigaya kuwo aad u fudud.
• Talaabada koowaad. Aan soo qaadanno tusaale ahaan Miiska 7 jeer. Anaguna hal mar ayaan wada akhrin doonnaa. Ha ka welwelin haddii aadan xafidin dhammaantood, marka hore tani waa wax iska caadi ah, waxaan uun aqrin doonnaa.
• Talaabada labaad. Waxaan ku daboolaynaa dhammaan xalalka warqad yar, iyada oo aan la daboolin isku dhufashada, waxaan kaliya ku daboolaynaa xalalka sidan ah:
• Talaabada saddexaad. Waxaan bilaabi doonnaa bilowga waxaanan isku dayaynaa inaan ogaano inta 7 × 1 ay tahay, waxaan dhahnaa natiijada cod dheer oo hoos u dhig warqada si aad u hubiso, hadii aad si sax ah u heshay, ku sii wad isku dhufashada 7 next 2 ee soo socota, hadii aad ku guuldareysatay waa inaad daboosho dhammaan xalka iyo soo noqoshada si loo bilaabo.
• Tallaabada afraad. Haddii aad garaacdo 7 × 2, ka dib sii wad inaad hoos u dhigto warqadda mid mid illaa iyo dhamaadka, haddii aad u xiisto waa inaad dhammaantood mar labaad dabooshaa oo aad ka bilowdaa bilowga. Iyo sidaas miisaska oo dhan.
Nidaamkani wuxuu adeegsadaa xusuustaada si loo kordhiyo dareenka. Sidan oo kale, maskaxdaadu waxay ku dadaali doontaa inay ogaato jadwalka isku dhufashada si aysan u bilaabin inay ka bilowdo miis kasta. Taasi waa sababta nidaamkani uga mid yahay kuwa aan u aragno inay yihiin kuwa ugu waxtarka badan. Isla mar ahaantaana waxaan ku celin doonaa jadwalka si isdabajoog ah, sidaa darteed daraasadda ayaa noqon doonta mid aad u dhameystiran.
Xusuusta muddada-dheer waa mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan. Layligani waxa uu soosaarayo ayaa ah in maskaxdaadu aad u feejigan tahay, maxaa yeelay way ogtahay haddii aad guul darreysato inaad dib ugu laabaneyso bilowga markale. Tani waa inaad ku sameysaa 10ka jadwal ee isku dhufashada, iyo ku celcelinta habka marar badan Waxaan dammaanad ka qaadeynaa in 1 saac aad wada ogaan doontaan dhammaantood!
Faahfaahin xiiso leh oo ku saabsan miisaska isku dhufashada :
• Miisaska isku dhufashada waa hawlgal xisaabeed fudud kuwaas oo ka kooban ku darista tiro aad u tiro badan, tusaale ahaan 7 × 3 = 21 (tan macnaheedu waa 7 + 7 + 7 = 21). Waa hawlgallo aad u fudud laakiin isla mar ahaantaana aad muhiim ugu ah nolosha, maadaama aad in badan u adeegsan doontid.
• Muhiimadda in la ogaado miisaska isku dhufashada waa muhiim, Tusaalooyinka isticmaalka qaarkood waxay noqon karaan: haddii liinta u dhiganta 5 doollar oo aan iibsado 4 liin, markaa intee in le'eg bay igu kacaysaa dhammaantood? Hawlgal xisaabeed 5 x 4 = 20, waxaan ognahay in 5 dollar x 4 liin ay tahay 20 dollar. Waxaad sameyn doontaa qalliinkan xisaabeed kumanaan jeer noloshaada oo dhan.
• Waa inaan si hagaagsan u barannaa. Waa muhiim inaad sifiican u garatid si aad uhesho xalka isku dhufasho kasta isla markiiba, tani waxay noo ogolaaneysaa inaan waqti badan ku badbaadinno xisaabinta laxiriira.
• Xeelado badan ayaa jira si loo ogaado miisaska isku dhufashada, waxaan kugula talineynaa maqaalka sida loo barto jadwalka isku dhufashada, laakiin sidoo kale waxaan u sharaxeynaa faahfaahinta qaar, tusaale ahaan: haddii aan ogaanno inta ay tahay 3 × 4 = 12, waxaan sidoo kale ogaan doonnaa inta 4 × 3 = 12 yahay, xusuusnow in amarku uusan saameyn ku yeelan xalka, sidan 7 × 3 = 21 iyo 3 × 7 = 21. Khiyaanadani waxay kaa caawin doontaa inaad u isticmaasho hawlo badan.
• Habka ugu fiican uguna waxtarka badan ee lagu barto jadwalka isku dhufashada, waxay ka kooban tahay ku soo noqnoqoshada miis kasta oo soo noqnoqda, tani waxay kaa dhigeysaa inaad si fudud ku xasuusato oo aad noolaatid.
Hadda oo aad ogtahay miisaska, waqtigii ayaa la gaadhay noloshooda baro, degelkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa tabaha xusuusta oo kaa caawin doona inaadan waligood illaawin isla markaana aad jawaab deg deg ah u hesho markasta oo aad u baahato
Recuerda que joogtayntu waa furaha guusha, in kastoo ay umuuqdaan kuwo adag, miisaska isku dhufashada waxay u baahan yihiin waqti aad u yar in la barto weligood, waa uun ku celcelinta iyo ku soo celinta mid kasta oo iyaga ka mid ah, waxaan hubnaa in galabtii aad awoodi doontid inaad ku guuleysato yoolka aad adigu noloshaada kaga xusi lahayd xusuustaada.